Maxaa warbixinaha qaramada midoobay looga been sheegaa xaaladda Somalia ? Qalinkii Cali Hassan
Ilaa tobankii sano ee u danbeeyey waxaa golaha amaanka laga hor akhriyayey warbixinno ka haldaaya xaalada Somalia. Warbixinahaas oo uu inta badan jeediyo ergayga gaarka ah ee xoghaya guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Somalia.
Warbixiintaa waxaa inta badan lagu sheegaa in xaalada Somalia soo wanaag sanaanayso dhinaca amniga, dhismaha hay’adaha Dawlada iyo dhaqaalahaba.
Hadaba iyada oo aynu ognahay in aanu xaalku sidaa ahayn, maxay Qaramada Midoobay u madal hufiyaan beesha caalamka? Maxayse Somaliland ugu badnaan hal ama laba sadar oo dhaliil u eg uga Xusaan?
Jawaabtu waa sidan; Somaliya waxaa si dadban u maamula Qaramada Midoobay, dhamaan hay’adaha dawladana waxaa mushaarada siiya Q. Mushaharada iyo adeega kale ee Ciidamada nabad ilaalinta waxaa bixisa QM. Lacagta ay QM bixinayso waxaa laga soo qaadaa dawladaha waawayn waxaana lagu bixiyaa in Somaliya lagu xasilinayo iyo in lagula dagaalamayo argagixisada.
Hadaba warbixinaasi dhamaantood waa laba shay a) xisaab celin oo waxaa lagaga jawaabayaa waxa lacagtii lagu qabtay. Waxay QM u sheegaysaa dawladihii in ay lacagtoodii wax fiican ku qabteen b) iyo in ay quud- darraynayaan in mid kale la siiyo oo waa maqdarad. Ma jiro masuul ka socda QM oo odhan kara arinka Somaliya ee dhinaca siyaada waxbaa ka khaldan. Markaa waa inay meesha faan iyo buun buunin ka dudubiyaan.
Dhinaca kale waxay Somaliland u qariyaan si ula kac ah maxaa yeelay halkan ma maamulaan waxaa ka jirta nabadgelyo iyo midaam dawladeed oo aan caalamka wax kharash ahi kaga bixin. Markaa ergayga XGQM ma odhan karo waxbaanu ka qabanay Somaliland dhiga siyaasadda iyo amniga oo waayo dee waxba kumay darsan, sidoo kalena ma ammaani karo oo waxaa hortaala su’aal deeqbixiyayaasha oo ah hadii dhulka intaa leeg ay nabad iyo dawlad casri ah ku dhisteen iyada oo aan wax aduun ah aanay ku bixin beesha caalamku maxay tahay tan lagu daldalayo koonfurta Somalia?
Markaa waa in ay QM la meeraysataa beesha caalmaka.